Wariye Cabdisalaam Xiis oo shalay (Axad) lagu dilay Muqdisho ayaa maanta la aasay. – Radio Daljir
Wariye Cabdisalaam Xiis oo shalay (Axad) lagu dilay Muqdisho ayaa maanta la aasay.
Muqdisho,Dec,19 -Wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis oo ka mid ahaa wariyayaasha ka howlgala magaalada Muqdisho oo maalintii shalay nin ku labisnaa dareyska ciidamada dowladda uu ku toogtay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu aasay duleedka magaalada Muqdisho.
Aaska wariyaha ayaa waxaa ka qaybgalay bahda warbaahinta iyo dadwayne badan oo ka kala socday dhamaan xaafadaha ay ka koobantahay magaalada Muqdisho,waxaana ay ALLAH uga baryeen inuu janada uu ka waraabiyo wariyaha,islamarkaana uu samir iyo Iimaan uu ka siiyo eheladii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday.
Wariyeyaashii goob jooga ka ahaa goobta uu kasocday aaska meydka wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis ayaa dhankooda muujiyay sida ay uga muragaysanyihiin geeridiisa, waxaana qaarkood ay madaxa ku soo xirteen astaamo ay ku muujinayaan dareenkooda muragada xambaarsan ee dilka wariyaha.
ALLAh u naxariistee wariye Cabdisalaam Sheekh Xasan oo u shaqeynayay telfishinka ku hadla afka Soomaaliga ee Horn Cable,fadhiguusuna uu yahay magaalada Hargaysa ayaa waxaa dilkiisa siweyn u cambaareeyay bahda saxaafadda ee gudaha iyo dibadda.